IVeki yokungondleki-iBhanki yokutya yaseGalveston County
admin Matshi 21, 2019 0 Comment Imfundo yezondlo
Sisebenzisana ne-UTMB kule veki kwaye sibhiyozela iveki yokungondleki. Yintoni kanye kanye ukungondleki? Ngokwe-World Health Organisation "ukungondleki kubhekisa kukusilela, ukugqitha okanye ukungalingani kwindlela ubani atya ngayo amandla kunye / okanye izondlo." Isenokuba kukungondleki okanye ukungondleki. Xa umntu ecinga ngokungondleki, bahlala becinga ngabantwana ababhityileyo, kodwa into esiyibonayo ngoku kukungondleki. Ngaba umntu angatyeba aze angondleki? Ngokuqinisekileyo! Ukutya okutyayo kunokuba yindawo apho umntu atya khona iikhalori ezininzi, kwaye azuze ubunzima, kodwa mhlawumbi engakutyi ukutya okufanelekileyo, ngenxa yoko ayasilela kwiivithamini kunye neeminerali ezininzi. Kunzima ukuthi yeyiphi “embi”, kodwa zombini ezi ntlobo zikhona kwindawo esihlala kuyo, kwaye kufuneka zijongiwe ngokufanelekileyo.
Yintoni ebangela ukungondleki? Zininzi izinto, kodwa ezinye zezo zixhaphakileyo kukunqongophala kokutya mhlawumbi ngenxa yezizathu zemali okanye ukungafumaneki ngokwaneleyo kokutya ngenxa yezothutho okanye izizathu zokhuseleko, ukuhlala ezilalini, njl. Njl. Ukunqongophala kokutya lixesha elibanzi kwaye kubhekisa kukunqongophala kokufikelela kokutya okusekwe kwimithombo yezemali nakwezinye izixhobo. Ngokwe-Feeding Texas, eGalveston County (zip code 77550) i-18.1% yabantu bahlala kumakhaya angakhuselekanga ngokutya. Kunzima ukuchaza ukuba bangaphi abantu abangondlekanga, kodwa ukuba umntu akazi ukuba ukutya kwabo okulandelayo kuvela phi, ngokuqinisekileyo kubabeka emngciphekweni wokungondleki. Umntu ongondlekanga akasoloko elambile. Basenokungatyi nje, okanye bangabinakho ukufikelela kuzo, iziqhamo ezaneleyo, imifuno, kunye nezinye izinto ezinempilo, okanye umzimba wabo awunakho ukufunxa izondlo eziyimfuneko. Ukungondleki kunokubangelwa yimeko yonyango.
Yintoni esinokuyenza ukunceda? Thina e-Galveston County Food Bank sinokunceda ngokubonelela ngokutya kunye nezixhobo kwabo banesidingo. Wena ekuhlaleni unganceda ngokunikezela ngokutya ngqo kwabo banesidingo okanye kwibhanki yokutya yendawo yakho, ukuba awukwazi ukwenza oko, dlulisa nje ulwazi apho uncedo lunokufumaneka khona. Akukho mntu ufanele ukuba alambe!
egqithileyo ngeposi Previous: INyanga yeSondlo kuZwelonke
Okulandelayo elilandelayo: Ukuthenga "okusempilweni" kuhlahlo-lwabiwo mali lwe-SNAP